theZOMI: [mrsorcerer:37970] မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် နှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး
[mrsorcerer:37970] မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် နှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး
မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် နှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး
by Zawminn Htwe (Notes) on Friday, April 19, 2013 at 6:31pm
ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်းကာလ မြန်မာပြည်၏ အပြောင်းအလဲများသည် မူလက လွန်စွါမှပင် ငြင်သာသည်ဟုထင်ရငြား လတ်တလော နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာမှုများ နှင့် လူမျိုးရေး အထိကရုဏ်းတို့ကမြန်မာပြည်သည် စစ်မှန်သည့် အပြောင်းအလဲ ကိုဖေါ်ဆောင်နိုင်ပါ့မလား ဆိုသည်မှာသံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိလာသည်။ အပြောင်းအလဲဆိုသည်မှာ အတိတ်နှင့်လက်ရှိ အချိန်တို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသောအနေအထားနှင့်စနစ်တို့ကို လက်မခံနိုင်သောကြောင့် ပိုကောင်းသည့် အနေအထားတစ်ရပ်ကိုဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်သည်။ သို့လင့်ကစား၊ လက်ရှိကျွန်တော်တို့လူ့အသိုင်းအဝိုင်း၏ ပရမ်းပတာမျှော်လင့်ချက်နှင့် တလွဲအသုံးချလိုသည့် ကိုယ်ကျိုးရှာစိတ်ဓာတ်များအကြား ပေါက်ဖွါးလာခါစ အပြောင်းအလဲမှာ မည်သို့ဆိုးရွားစွာ ပုံသွင်းခံရမည်ကိုမတွေးဝံစရာပင်ဖြစ်သည်။ မှန်ပါသည်။ စနစ်ဟောင်းအကြား အကျဉ်းချ ခံထားရသည့်ဦးဏှောက်များနှင့် ကြီးပြင်းလာကြသော ကျွန်တော်တို့သဘောထား မကြီးနိုင် ကြသေးသည်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လက်ခံနိုင်စရာသည်။ သို့ပေငြား၊ ယခုလက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသောအနေအထားတို့ကို သုံးသပ်ချက်များအရ၊ မြန်မာပြည်သူများသည် စစ်မှန်သည့်အပြောင်းအလဲကို အကယ်စင်စစ်လိုလားရဲ့လား ဟူသည့် အချက်မှာမေးခွန်းထုတ်စရာပင်ဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးတွင်အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးနှင့် ရင်ကြားစေ့ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အလွန်အရေးပါသော "Social Capital"ဟူသည့် လူမှုအရင်းကို အသုံးချရေးအတွက်လူတိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးတို့မှာ နိုင်ငံစည်ပင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အသက်သွေးကြောများ သဖွယ်ဖြစ်သည်။ သို့ပေငြား အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုမျက်ကွယ်ပြုလိုသော မျိုးချစ်အမည်ခံ အဖျက်သမားများနှင့် အမျိုးသားရေးခေါင်းစဉ်အောက်တွင် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကို အသက်သွင်းနေကြသော နောက်ပြန်ဆွဲ ဝါဒီတို့အကြား၊မြန်မာပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးမှာ ဝိုးတဝါးနှင့်အချိန်မရွေးပျောက်ပျက်သွားနိုင်သော အနေအထားတွင်ရှိနေသည်။
ယခုလတ်တလောအွန်လိုင်းမီဒီယာများနှင့်၊ လူမှုရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ တွင် တွေ့နေရသောပို့စ်အများစု၊ကွန်းမန့်များနှင့် လုပ်ကြံဓာတ်ပုံအချို့တို့သည် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကိုအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ဖန်တီးနေကြလျက်ရှိပြီး ကနဦးတွင် ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေးအသွင်ဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အစ္စလာမ် ဆန့်ကျင်ရေးကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လုပ်ဆောင်လာကြကာ မြန်မာပြည်တွင်းရှိလူနည်းစုမွတ်ဆလင်မ်များအား တိုက်ဖျက်ရေး ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်သို့ အသွင်ပြောင်းသွားကြသည်။ ထိုအချက်ကထူးပြီး မဆန်းလှ။ အသိဥာဏ်အမှောင်တိုက်ထဲ ပိတ်မိနေသော လူတစ်စု၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မျှသာ ဖြစ်ပြီး၊ ယခင်ကလည်းရှိခဲ့သည်၊ ယခုလည်းလုပ်နေသည်၊နောင်လည်းဆက်လက် ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ကျွန်တော့်အတွက် ထူးဆန်းနေသည်ကား၊နိုင်ငံကိုချစ်လှပါသည် ဆိုသော နိုင်ငံရေးသမား ကြီးများက ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေကြသည်။နောက်ကိုပြန်မလှည့်ပါဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များက မျက်ကွယ် ပြုထားကြသည်။ပွင့်လင်းလာပါသည်ဆိုသော မီဒီယာက သတင်းထိန်ချန်ထားကြသည်။ ထို့ထက်ပိုပြီးဆိုးသည်ကတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ယက်မသဖွယ် ပဲ့ကိုင်ထိန်းသိမ်းပေးရန်တာဝန်ရှိသော လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း(NGO) များနှင့် အဆိုပါNGOတို့၏ တာဝန်ရှိသည့်သူများကပါ ဝိုင်းဝန်းမြောက်ထိုးပင့်ကော် လုပ်ကြလေပြန်သည်….။ အဆိုးရွားဆုံးအနေဖြင့်မှုကား အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီတို့၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း တစ်ချို့နှင့်ပါတီဝင် အများစုကပါ မွတ်ဆလင်မ် ဆန့်ကျင်ရေးကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် ထောက်ခံအားပေးပြီးကိုယ်ထိလက်ရောက် ပါဝင်ပတ်သတ် ကြလေသောအခါ…။ တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်အတွက် ကျွန်တော်လွန်စွါမှပင်တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားမိပါသည်။
ထိုမျှသာမကသေးအတန်ငယ် သဘောထားပျော့ပြောင်းသူများက အကြမ်းဖက်မှု ကို လက်မခံပေငြား ၄င်းတို့၏နှုတ်ထွက်စကားတို့တွင် မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် များသည် ဧည့်သည်များ ဖြစ်သောကြောင့်အိမ်ရှင်ဖြစ်သူဗုဒ ဘာသာဝင်များနှင့် သင့်မြတ်အောင် နေထိုင်ရမည်ဟူသောသြ၀ါဒများချွေလာကြသော အခါ လွန်စွါမှပင် ခံပြင်းမိသည်။ ထိုစကားလုံးသည်အပေါ်ယံအားဖြင့် လူတစ်ချို့အတွက်နားထောင်ကောင်းပေငြား လူ့အခွင့်အရေးနှင့်နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လျစ်လျူရှု ချိုးဖေါက်ခြင်း(တနည်း) အနုနည်းဖြင့် အကြမ်းဖက်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ယခုဆယ်စုနှစ်တွင်း ခိုးဝင်လာပါသည်ဟုစွပ်စွဲခံထားရသော သူများအား ထားရှိသော မြန်မာပြည်သူတို့၏ သဘောထားအပေါ်ကျွန်တော်မှတ်ချက်မပေးလိုပါ။ သို့ပေငြား ယခင့်ယခင်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ အရကော၊ယခုလက်ရှိ 2008 ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရပါ၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးသူမြန်မာမွတ်ဆလင်မ်များအပေါ်ဧည့်သည်ဟူ၍ သတ်မှတ်ဆက်ဆံ နေခြင်းအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပါသည်။ ယခုဆောင်းပါးတွင်ကျွန်တော်သည် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအား သတ်မှတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားဟူသည့် အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနှင့် ဆက်ဆိုင်သော မြန်မာပြည်၏ဥပဒေပြဌာန်းချက်များအား ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရှေးဦးစွါဆွေးနွေးလိုသည်မှာ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတို့က သဘောတူညီသတ်မှတ်မှုပြုပြီးသော နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များကိုတင်ပြဆွေးနွေး လိုပါသည်။ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးသော ပြည်သူတို့အပေါ် မည်သည့်အုပ်ချုပ်သူအစိုးရကမျှ ဧည့်သည်ဟူ၍ သတ်မှတ်လို့မရပါ။ ရှေးဦးစွါ အခြေချမှုနှင့် ကာလရှည်ကြာအတည်တကျနေထိုင်မှု တို့အပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်ချက်များ ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း ဥပဒေ၏ရှေ့မှောက်တွင် မည်သည့် နိုင်ငံသားမဆို ရပိုင်ခွင့်မှာ ထပ်တူကျသည်သာဖြစ်၏။သို့ဖြစ်ပေရာ အောက်တွင်ဖေါ်ပြမည်ဖြစ်သော နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအပေါ်တွင် ကွဲပြားသောသတ်မှတ်ချက်များကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
လူမျိုးစုဖြစ်ခြင်း သည် အစုအဖွဲ့အပေါ်အခြေခံသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် တူညီသော မျိုးဗီဇနှင့် ၀ိသေသလက္ခဏာများ (ဥပမာ.. ဘာသာစကားတူခြင်း၊သမိုင်းအမွေအနှစ်တူညီခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုတူညီခြင်း) စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။ အများအားဖြင့်လူမျိုးစု ဖြစ်ခြင်းသည် ပထ၀ီအနေအထားအရ နေရာဒေသ တစ်ခုတည်းတွင် အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း၊တူညီသော စားသောက်နေထိုင်မှု ပုံစံရှိခြင်း၊ ကိုးကွယ်ရာ အယူအဆတူညီခြင်းတို့သည် လူမျိုးစုဟုခေါ်တွင်သတ်မှတ်ရာ၌ အရေးပါလှသည်။
လူမျိုးနွယ်ဆက် ဟူသည်Ethnicity (လူမျိုးစု) နှင့် ဆင်တူပေငြား လူပုဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အသွင်သဏ္ဍာန်၊ အသားအရောင်၊စသည်တို့နှင့် ပိုမိုပတ်သက် ဆက်စပ်သည်။ လူမျိုးနွယ်ဆက် ဟူသည် ဇီဝသဘောတရားအရ သတ်မှတ်ထားမှုဖြစ်ပြီးဆင်းသက်ရာ မျိုးဗီဇတူညီခြင်း (ဥပမာ. ဆံပင်အရောင်၊ မျက်လုံးအရောင်၊ အရိုးအဆစ်တည်ဆောက်မှု၊မေးရိုးအသွင်သဏ္ဍာန်) အစရှိသည့် တူညီမှုများအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(အမျိုးသား/နိုင်ငံသားဖြစ်မှု)သတ်မှတ်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် လူပုဂိုလ်၏ မွေးဖွားရာ နိုင်ငံပေါ် အခြေခံခြင်း (သို့)Citizen နိုင်ငံသားသတ်မှတ်ချက် နှင့် ဘောင်ဝင်မှုတို့အပေါ် မူတည်သည်။ သို့သော် ရံဖန်ရံခါတွင်နိုင်ငံသား ဖြစ်မှု ကို ထိုပုဂိုလ်၏ လက်ရှိ အခြေတကျ နေထိုင်ရာဒေသ (သို့) အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများ ထပ်တူကျခြင်း စသည်အားဖြင့်လည်း သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ဥပမာ လူတစ်ဦးသည် နိုင်ငံA တွင်မွေးဖွါးခဲ့ငြား နိုင်ငံ B သို့ ထာဝရ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်မည်ဆိုပါက ယင်းပုဂိုလ်အားနိုင်ငံ B အနေဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ခွင့်ပြုပေးရမည်ဖြစ်သည်။နိုင်ငံသားဖြစ်မှု သတ်မှတ်ရာတွင် အရေးပါသော အခြားအချက်တစ်ချက်မှာ အချို့မျိုးနွယ်စုများသည်ပြည်နယ် အတည်တကျ သတ်မှတ်ထားပေးမှု မရှိငြား (သို့) နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုမှု နည်းပါးငြားယင်းမျိုးနွယ်စုများ အနေဖြင့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုတွင် ရပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ရှိသည် ဟူ၍သတ်မှတ်ထားသည်။ (ဥပမာ ပါလက်စတိုင်းများ၊ ကာ့ဒ်လူမျိုးများနှင့် တမီလ်လူမျိုးများ)
နိုင်ငံသား ဖြစ်ခြင်းသည်သတ်မှတ် နိုင်ငံတစ်ခုတွင် မွေးဖွါးခြင်း (သို့) အခြားနိုင်ငံတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိစဉ်မွေးဖွါးမှုပြုခြင်း (သို့) အခြားနိုင်ငံသား/သူ တစ်ဦးနှင့် လက်ထက်မှု ပြုခြင်း (သို့)စရိုက်လက္ခဏာနှင့် ၀ိသေသ တူညီခြင်းတို့ အပေါ်မှုတည်၍ အသိအမှတ်ပြုခြင်း စသည်အားဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်သတ်မှတ် လက်ခံထားကြသည်။ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခြင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက အဆိုပါပုဂိုလ်သည် တင်းပြည့် နိုင်ငံသား ဖြစ်၍ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ရရှိရမည်ဖြစ်သည်။(ဥပမာ မဲပေးခွင့်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်)
သို့ဖြစ်ပေရာမည်သည့် လူမျိုးစု၊ မျိုးနွယ်ဆက်၊ တိုင်းရင်းသား တို့မှ ဆင်းသက်လာသည်ဖြစ်စေ၊သို့တည်းမဟုတ် ကာလရှည်ကြာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု မှနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသောကြောင့် နိုင်ငံသားဖြစ်လာသည်ဖြစ်စေ မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆို အဆိုပါတိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိမှု ပြုရမည် ဖြစ်ပြီး အပြန်အလှန်အားဖြင့်လည်းနိုင်ငံတော်မှ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ ပေးရန်လိုအပ်သည်။
ဆက်လက်၍မြန်မာပြည်၏ ယခင့်ယခင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေများ အရသော်၎င်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများအရသော်၎င်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ အခွင့်အရေးသတ်မှတ်ချက်များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားပါမည်။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဟူသည်ကို..
· Personborn of parents both of whom are nationals of the Republic of the
(က)ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသား မိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွါးသူ
· Personwho is alreadyacitizen according to law on the day this Constitution comesinto operation.
(ခ)ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုပြဌာန်းသည့် နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူ
Sect: 345, 2008 constitution
အဆိုပါအတိုင်းဖွင့်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်၊ လူတစ်ဦးအနေဖြင့် ၄င်းကိုယ်တိုင်ကော၊၄င်း၏မိဘနှစ်ပါးကပါ မြန်မာပြည်တွင် မွေးဖွါးသည်ဆိုပါက၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုအလိုအလျောက်ရရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ၄င်းအပြင် အခြေခံဥပဒေကြီးက နိုင်ငံသားတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ပြဆိုရာတွင်
· Equalrights before the law and legal protection
နိုင်ငံတော်သည်မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေအရာတွင်တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိစေရမည်။ ထို့ပြင် ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူညီမျှစွာရယူပိုင်ခွင့်ပေးရမည်။
· Non-discrimination based on race,birth, religion, official position, status, culture, sex andwealth
နိုင်ငံတော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ရာထူးဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာတို့ကိုအကြောင်းပြု၍ ခွဲခြားမှု မရှိစေရ ။ ယင်းအပြင် တန်းတူအခွင့်အရေး အနေဖြင့်
(f) Exploration of art, science and technology.
sect:347, sect:348, Sect:349
ဖေါ်ပြပါမူရင်းအတိုင်းတရားဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် လူတိုင်းအခွင့်အရေး တန်းတူရှိရမည်ဟူ၍၄င်း၊ မျိုးနွယ်၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ရာထူးရာခံ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဥစ္စာဓန၊ လိင်သဘာဝ၊ စသည်အားတို့ဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုရ ဟူ၍၄င်းဖေါ်ပြပါရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ၏ မည်သည့်နေရာတွင်မျှ မည်သည့်နိုင်ငံသားတို့ကအိမ်ရှင်ဖြစ်၍ မည်သို့သော နိုင်ငံသားတို့က ဧည့်သည် ဖြစ်သည်ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုထားခြင်းအလျဉ်းမရှိငြား၊ လူပုဂိုလ် အချို့တို့၏ အိမ်ရှင်၊ဧည့်သည်ဟူသည့် အယူအဆကိုတွင်တွင်ပြောဆိုနေခြင်းမှာ လွန်စွါမှပင် ရယ်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါအချက်များကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးကိုအမှန်တကယ် လိုလားသည် ဆိုပါက လူတစ်ဦးခြင်းစီ၏ ဖြစ်တည်မှု၊ နိုင်ငံသားတို့၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်၎င်းတို့၏တန်ဖိုးတို့ကို လက်ခံလေးစားပေးမှု ပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့၏ အသက်ရှင်သန်ရပ်တည်မှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု တို့ကိုအသက်နှင့်လဲ၍ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှု ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်နိုင်ငံသားတို့၏ နောက်ဆက်တွဲအခွင့်အရေးများ အဖြစ်အခြေခံဥပဒေမှ ပြဒါန်းထား သေးသည်တို့မှာ
· TheRight to life, dignity and personal freedom (sect:44,353, 354, 355)
· Freedomof opinion and expression
· Freedomof association and organization
· Theright to language, culture , literature, education and health ( sect:22,28,366)
· Forcelabor, enslaving and anti-trafficking in person are prohibited. (sect:358, 359)
· Religiousfreedom ( sect:34)
စသည်ဖြင့်အသက်ရှင်ခွင့်၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ရပ်တည်ခွင့်၊ လွပ်လပ်စွါနေထိုင်ခွင့်၊ လွပ်လပ်စွါဖေါ်ပြပြောဆိုခွင့်၊ ငြိမ်းချမ်းစွါစုဝေးခွင့်၊ အကျိုးပြု အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခွင့်၊ ဘာသာစကား၊ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေးတို့တွင်တန်းတူညီမျှရပိုင်ခွင့်နှင့် စောင့်ထိန်းခွင့်၊ အတင်းအကျပ် အလုပ်စေခိုင်းခြင်းနှိပ်စက်ကလူပြုခြင်းတို့မှ အကာအကွယ်ရရှိခွင့်၊ လွပ်လပ်စွါ ကိုးကွယ်ခွင့် တို့ကိုသတ်မှတ်ပြဌာန်းပေးထားပြီး ဖြစ်ပေရာ၊ မြန်မာပြည်တွင် ပေါက်ဖွါးသော မိဘကမွေးဖွါးသည့်၊မြန်မာပြည်သား ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် အားလုံး၏ရပိုင်ခွင့်တို့နှင့် အကျုံးဝင်နေသည်မှာအထင်အရှားပင်ဖြစ်သည်။
ယင်းအပြင်အရေးအကြီးဆုံး အချက်အနေဖြင့် အပိုဒ် ၃၆၄ တွင် ပြဌာန်းထားသည်မှာ..
"နိုင်ငံရေးကိစ္စအလုိ့ငှာ ဘာသာသာသနာကို အလွဲသုံးစားမပြုရ။ ထို့ပြင် လူမျိုးရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်၊ တစ်ဂိုဏ်းနှင့်တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း တစ်မျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာစေရန် အကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည်*ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ထိုအပြုအမူမျိုးအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေ ပြဌာန်းနိုင်သည်။" ဟူ၍ အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကိုအသက်သွင်းသူများ၊ ဘာသာရေးအမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူများ၊ ဘာသာရေးအကြောင်းပြ အမုန်းတရား သွတ်သွင်းသူများသည်မည်သည့်လူမျိုး၊ မည်သည့်ဘာသာဝင်၊ မည်သို့သော ပုဂိုလ်ဖြစ်နေသည် ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်သူများဖြစ်ကြသည်။ လူ့အခွင့်အရေးကို မျက်ကွယ်ပြုချိုးဖေါက်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းအပြင် ထိုကဲ့သို့အပြုအမှုမျိုးကိုမြင်တွေ့ကြားသိရပါလျက် မျက်ကွယ်ပြုနေသူများ၊ နှုတ်ဆိတ်နေကြသူများ၊ အားပေးအားမြောက်ပြုနေကြသူများသည်လည်း တိုင်းပြည်အား အဖျက်အမှောင့်လမ်းကြောင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးနေသောတရားခံများ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေကြသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ယနေ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက် ခံနေရသူများမှာ မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် တစ်မျိုးတည်းသာမဟုတ်။ကျန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ အပါအ၀င် ဗုဒဘာသာဝင် ဗမာလူမျိုးများသည်လည်း ဆိုးဆိုးရွားရွားလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်ခံနေရသည်သာ ဖြစ်သည်။ သို့ပေငြား လူ့အခွင့်အရေးအတွက်၊ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် မိမိလူမျိုးတစ်မျိုးတည်း အခွင့်အရေးရပြီးရော၊ တစ်ခြားလူမျိုးများကဆက်လက်ပြီး အခွင့်အရေးများ မရပါစေနှင့် ဟူသည့် စိတ်ဓာတ်မျိုးက လူပီသသော စိတ်ထားမျိုးမဟုတ်ချေ။ထို့ပြင် မြန်မာမွတ်ဆလင်မ် များအနေနှင့်လည်း မိမိတို့အရေးကိုသာလျှင် ကွက်ကွက်လေး မတွေးပဲနိုင်ငံသားပီသသော စိတ်ဓာတ်ဖြင့် တိုင်းပြည်၏ အရေးကိစ္စ အားလုံးတို့တွင် အနစ်နာခံ အပင်ပန်းခံဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာပြည်သားအားလုံး၏ ကောင်းကျိုးကို ဖေါ်ဆောင်ရာတွင် တာဝန်ယူစိတ်များပြသရန်လိုအပ်သည်။ ကျန်တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအားလုံးအနေဖြင့် လည်း မိမိတို့အရေးကိုသာရှေ့တန်းတင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပဲ တစ်တိုင်းပြည်လုံးအရေးကို ပြည်ထောင်စုသား စစ်စစ်စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြင့် ဖန်တီးပုံဖေါ်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်တူတွန်းမှ ရွေ့နိုင်မည့် အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြောင်းအလဲ များကိုမြင်တွေ့လိုပါက ကျွန်တော်တို့ သဘောထားကြီးရန်၊ စည်းလုံးညီညွတ်ရန်လိုအပ်သည်။သို့မဟုတ်ပါက မည်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမျိုးကို ဖေါ်ဆောင်သည်ဖြစ်ပါစေ သမင်မွေးရင်းကျားစားရင်း အဖြစ်မျိုးဖြင့် အဟောသိကံ ဖြစ်နေဦးမည်မှာ မုချမလွဲပင်ဖြစ်သည်။